कसरी गर्न सकिन्छ कर्णालीमा लगानी? :: माधव चौलागाईं :: Setopati
कसरी गर्न सकिन्छ कर्णालीमा लगानी?
सरकारले पछिल्लो पल्ट २०७३ फागुनमा 'नेपाल लगानी' सम्मेलन गरेको थियो। सम्मेलनमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, नेपाल लगायत देशका हजारभन्दा धेरै कम्पनी सहभागिता थियो। दुई दिनको सम्मेलनमा अपेक्षा गरेभन्दा धेरै बढी रकमको प्रतिबद्धता आयो। ११ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धताका कारण सम्मेलन सफल ठानियो।
कर्णालीमा पनि यो प्रयास हुनेछ।
अपरम्परागत ढंगले सोच्दा 'मेडिकल टुरिजम' आश लाग्दो क्षेत्र देखिन्छ। आपतकालीन शल्यक्रियाबाहेक हाडजोर्नी, छाला, घाउ लगायत लामो उपचार र आरामपछि स्वास्थ्यलाभ लिने अवस्थामा जुम्लाको हावापानी सहयोगी हुनसक्छ। सुविधासम्पन्न उपचार र आरामको व्यवस्था गर्ने लगानीको एउटा क्षेत्र हुनसक्छ।
आवासीय सुविधासहितका शिक्षालयहरु - अंग्रेजी स्कुल, कलेज र तालिम केन्द्रहरु अर्को दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित हुनसक्ने क्षेत्र हो।
३५ वर्षअघि कर्णाली र आसपास जिल्लाका विद्यार्थीका लागि कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय खुलेको छ। यहाँ बीस वर्षअघिदेखि नै देशभरबाट विद्यार्थी आउन थालेका छन्। यसले कर्णाली 'दुर्गम' भन्ने त केवल सोच मात्र भएको प्रमाणित गरिसकेको छ। हाल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने कोर्षमा भर्ना हुन चाहनेको संख्याले पनि यो उच्च सम्भावना देखिएको छ।
खेलकुद अर्को लगानी सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। विशेषगरी साहसिक खेलकुद यहाँ फ़स्टाउन सक्छ। कीर्तिमानी धावक हरि रोकायाले कोरेको 'कर्णालीमा हाई अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर' सपना वास्तविक बन्न सक्ने क्षेत्र हो। पूर्वाधारबिनै हौसलाको भरमा मात्र त्यही माटोमा दौडाएर स्थानीय युवालाई मेडल जित्नसक्ने बनाउन सकिएको छ। पर्याप्त संरचना र सुविधा उपलब्ध गराउन सके देशविदेशबाट आकांक्षीहरू नओइरिने कुरै छैन।
जुम्लादेखि रारा पुग्ने बाटोमा पर्ने चट्टाने भीरहरूमा 'रक क्लाइम्बिङ' खेल बन्न सक्छ। कतिपय भीरमा परम्परागत तरिकाले भिरमह र शिलाजीत खोजी भइरहेको हुन्छ।
अहिले अव्यावहारिक झैं लागे पनि उचाइका भूभाग र हिमाली चौरहरू अर्थात डोल्पा, मुगु, जाजरकोटसँग जोडिने भाग, पाटनका थुम्का, भिरालो र फाँट 'स्किईङ' गन्तव्य हुने सम्भावना राख्छन्।
कसले गर्लान् लगानी?
जस्तो, जुम्ला भाग्यवाद मान्ने समाज हो। आन्तरिक आयका स्रोत सीमित छन्। निश्चित केही जातीबाहेक अधिकांश हिस्सा बाहुन, क्षेत्री र दलित समुदायको छ। उनीहरूमा व्यापारिक परम्परा छैन। प्रायः सबै कृषि र पशुपालन गर्छन्। त्यसैले सबैको गतिविधि घडीको समयभन्दा पनि घरायसी कामकाजले निर्धारण गर्ने 'किसान समय'मा चल्छ।
जस्तै: छरितो र सहज निर्णय प्रकिया। 'रेड टेप' प्रवृत्ति व्यवस्थापन। सार्वजनिक-निजी साझेदारी सोचको विकास। संरचनाहरुको आधुनिकीकरण। सक्रिय र अर्थपूर्ण समन्वय। लगानीकर्ता प्रति सम्मान। लगायत।
'लगानीको करमा भारी छुट दिइने' भन्ने विषयले जुम्लाका स्थानीय स्तरमा एकखाले विवाद सुरु भएको छ। लगानी योग्य वातावरण दिन कर दायरामा समय-सापेक्ष यथोचित सुधार गर्दै जानु अनिवार्य हुन्छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ १९, २०७५, ००:२०:००